Mifalia amin'ny DuckTales Remastered izao amin'ny € 0,99 fotsiny amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Mifalia amin'ny DuckTales Remastered izao amin'ny € 0,99 fotsiny amin'ny App Store
Androany ao amin'ny Actualidad iPhone dia manome tolotra hafa tsy hay tohaina ianao fa tsy ho taraina ianao, lalao mahafinaritra iray avy amin'ny ozinina Disney izay tiana hankafizinao miaraka amin'ny zanakao amin'ity fialantsasatra ity na, maninona raha tsy izany !, Mba hahafahanao mankafy azy io sy mampatsiahy anao taloha.
Ny lalao tany am-boalohany DuckTales dia iray amin'ireo lalao 8-bit be mpitia indrindra sy be isa indrindra amin'ny fotoana rehetra Ary raha tsy fantatrao dia misy ao amin'ny Apple App Store ho an'ny iOS izany. Saingy tsy zava-baovao izany. Ny vaovao tsara dia ity: ity lalao ity dia nampidina ny vidiny hatramin'ny 90 isan-jato ary amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mividy azy ho an'ny iPhone sy ny iPad amin'ny € 0,99 ihany, raha eo anelanelan'ny 4,99 sy 9,99 euro ny vidiny mahazatra. Eto izahay dia milaza aminao ny antsipiriany rehetra momba ny DuckTales fa izaho aminareo dia nalaky nisambotra azy tamin'ity sarany tsy nampino ity.
1 DuckTales: Remastered, Scrooge's Adventures amidy
1.1 Endri-javatra lehibe
DuckTales: Remastered, Adventures an'i Dadatoa Scrooge amidy
Tsy misy zavatra tsara kokoa ankafizinao amin'ireo ankizy kely ao an-trano ankoatry ny lalao Disney; ary mbola tsara kokoa aza raha hitantsika io miaraka amin'ny fihenan-danja izay manan-danja tahaka ilay iray izay efa nampihariny DuckTales: Remastered.
DuckTales: Remastered dia "iray amin'ireo anaram-boninahitra 8-bit be fitiavana indrindra amin'ny fotoana rehetra" ary ankehitriny dia nampidina ny vidiny ho 0,99 Euros fotsiny ao amin'ny App Store. Matetika, ity lalao Disney ity dia sarobidy eo anelanelan'ny 4,99 sy 9,99, miankina amin'ny safidintsika ny kinova iPhone na ny kinova iPad na izany aza, izao afaka manana izany amin'ny iOS fitaovana rehetra ianao amin'ny euro iray monja.
Ary raha mamaky anay ianao na eo aza ny maha mpampiasa Android anao, ankoatry ny fankasitrahana anao dia tokony ho fantatrao ihany koa fa azonao atao maimaimpoana amin'ny alàlan'ny Amazon.
DuckTales: Remastered dia lalao mahafinaritra sy tsotra ho an'ny sokajin-taona rehetra izay "mitazona ny maha-azo itokiana azy 8-bit teo alohany ary manolotra tantara nitarina misy sary vaovao sy nohatsaraina. Ireo mpankafy DuckTales dia afaka miverina mijery ny andian-tsarimihetsika fahita tamin'ny taona 1980, feno ny feon'ireo feo tany am-boalohany sy sary manokana avy amin'ny arisivan'ny fampisehoana. "
Con DuckTales: Remastered hiditra ambanin'ny hoditra ianao, ary hiditra amin'ny volom-borona, iray amin'ireo gana gana malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra, Dadatoa Scrooge, fantatrao, ilay nanao zavatra izay tadiavintsika rehetra: misitrika amina tendrombohitra tena izy.
Raisiko ny anjara asan'ny Scrooge, ary manampy anao amin'ny sari-tany miafina, hitety faritra tsy mampino eran'izao tontolo izao ianao hitady harena sarobidy sy angano dimy. Izany no tanjonao, dia ny mahazo ny tsirairay amin'izy ireo. Saingy noho izany koa dia mila manana fahasahiranana betsaka satria ny mpamosavy sy ny "mpanao hatsikana" sasany te hangalatra ny harenanao rehetra, tsy hijanona amin'ny vato misakana rehetra izy ireo, fa tsy maintsy misoroka izany ianao.
Miaraha amin'i Gilito McPato amin'ny traikefa nahafinaritra izay mitondra azy manerana an'izao tontolo izao hahita harena malaza XNUMX! Ampiasao ny sarintanin'i Gilito McPato miafina hivezivezy any Himalaya, Amazon, Tranifornia, ny toeram-pitrandrahana afrika ary na ny Moon aza! Nefa tandremo ny ody ratsy mpamosavy ody sy ny Gulfs Hogs ratsy laza, satria maniry ny handray ny haren'i Scrooge McDuck izy ireo ary hijanona tsy misy na inona na inona! Mba hanavotana ireo zana-drahalahiny - Juanito, Jorgito ary Jaimito - Gilito McPato dia tsy maintsy miatrika zava-drehetra ary miady amin'ny lohan'ny epic mandritra ny fiainany. Tano mafy ny satrokao ambony indrindra ary milalao toy ny Scrooge McDuck eo am-pitetezana ny sarintany!
En DuckTales: Remastered dia ho hitanao endri-tsoratra sy sary voatsoaka tanana, maody mora ho an'ny vao teraka ary maody mavesatra ho an'ny mpankafy marina. Inona koa, nohatsaraina nomerika ny mozika, ary nitarina ny fitantarana sy ny teti-dratsy.
Ary raha tsy ampy izany rehetra izany, dia ny lalao mifanaraka amin'ny mpanara-maso Bluetooth, mba hiaina traikefa faran'izay betsaka.
Anisan'ireo toetra mampiavaka ny DuckTales: Remastered mijoro:
Milalao toa an'i Gilito McPato amin'ity famerenana ity an'ny platformer scrolling mahazatra.
ALAROBIA ny Himalayas, Amazon, Tranifornia, ny toeram-pitrandrahana afrikanina ary ny volana rehefa mitady harena ara-tantara dimy ianao.
ATTACK fahavalo miaraka amin'ny Scrooge McDuck's Pogo Jump ary ny Staff Twist.
HANDEFITRA ireo olon-dratsy amin'ny adin'ny bosoa
Hatsarao ny herinao amin'ny tsy faharesena ary mitady fo fanampiny hampitombo ny fahasalamanao.
MANOKA vatosoa hanalana ny sary 90 mahery amin'ny fahitalavitra voalohany.
Matotra tokoa, nahena hatramin'ny folo euro ka lasa euro iray monja, tsy fantatro izay antenainao hampidinana azy. Runeeeeeeee !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Mifalia amin'ny DuckTales Remastered izao amin'ny € 0,99 fotsiny amin'ny App Store
Afaka milalao Super Mario Run ho an'ny iPhone sy iPad izao ianao ao amin'ny Apple Store